कसरी म झन्डै हरायो 200 व्यापार यो गत महिना Bitcoin - Blockchain समाचार
कसरी म झन्डै हरायो 200 व्यापार यो गत महिना Bitcoin
एक instructive कथा Reddit द्वारा, जो अज्ञात रहन कामना.
त्यसैले, लामो कथा छोटो, म एक वर्ष पहिले व्यापार सुरु, 19k गर्न 1K देखि सारा रन भएको मार्जिन तिर्सना ( कहिलेकाहीं शीर्ष बन्द, कहिलेकाहीं पनि प्रारम्भिक वा ढिलो बन्द, तर सधैं लाभ बनाउन)
म फर्किए3म प्ले पोकर देखि थियो जो नीच BTC (समय 3K मा) मा लगभग 200 BTC जो लगभग थियो4माथि लाख र हुनेछ2लाख वर्तमान मूल्यहरु मा.
मलाई लाग्यो म एक व्यापारिक प्रतिभा, एक भगवान, जे सुकै होस्. जे भए पनि, जहाँ दुःख सुरु हुन्छ यो छ.
19k देखि 11k गर्न डम्प पछि म तल लामो भयो, र 12K 13k गर्न बाउन्स मा मेरो स्थिति थप्दा गरिरहे, 14K. त्यसपछि, को 16K मृत बिरालो मा, मेरो स्थिति थप थियो 100 लाभ मा BTC. बरु त्यसपछि बन्द र कुल भएको 300 BTC, म लाभ वृद्धि र मेरो स्थिति आकार वृद्धि. यो सम्पूर्ण स्थिति 12K फिर्ता ड्रप मा liquadated थियो, किनभने मेरो प्रविष्टि धेरै माथि सारियो थियो. म हराएको 100 BTC कागज लाभ र लगभग 50 BTC मार्जिन. म devasted थियो, र तल 150 BTC कुल.
स्थिति मूल्यांकन पछि, म 16 K गर्न पंप मरेको बिरालो थियो कि निष्कर्षमा आए र हामी कम जाँदै छन्. यसकारण म shorted. 12K मा. 13k मा थपियो. मा थपियो 14 र 15k. 17k मा माथि liquidated भयो. अर्को 50 BTC हानि. तल 100.
लाग्छ, ठीक हामी 17k मा एक उच्च उच्च गरे, पछाडि uptrend. लामो भयो. 13k मा liquidated भयो.
50 BTC बाँकी. तबाह, अनिश्चित, कुनै संकेत whats मा जा. 9k गर्न ड्रप मार्फत बसे, हामी बाउन्सगरीएका जब म यसलाई तल हुन सक्छ लाग्यो. मा खोजीमा 11500, आतंक बन्द 10500. हामी 13k गए जब म आतंक बन्द लागि आफैलाई लात मार थियो, मा लामो भयो 12800.
मेरो अन्तिम Bitcoin लागि यो बिहान Liquidated.
3 गर्न BTC 200, गर्न 0
यस समयमा म आघात मा अझै पनि हुँ, पछिल्लो केही महिना Ive सम्बन्ध र विद्यालय वास्तै, र Ive मेरो लाखौं संग बकवास रूपमा उच्च जीवन धनी जीवित बारेमा daydreaming गरिएको.
अब, म कतै छु.
पोस्ट यस त्यसैले अरूलाई गैंबल टाढा जीवन परिवर्तन पैसा dont. ठेगाना पोस्ट छैन दानको वा सुझावहरू PM मलाई dont चाहनुहुन्छ Dont. म BTC फेरि म भूल गर्न चाहनुहुन्छ किनभने शब्द सुन्न चाहनुहुन्छ कहिल्यै
gypsytoy म फेरि आउने जस्तो देखिन्छ छैन. म मूलतः म थियो सबै लगानी बाट गए कि बाहेक ओपी जस्तै कहानी छ (एक कलेज विद्यार्थी रूपमा) किन्नु 60 मा BTC 2013 र एक ठोस लागि बलियो पकड4वर्ष. त्यसपछि अवधिमा मानसिक स्वास्थ्य संकट भइरहेको 2016 र दिने 20 BTC टाढा अपरिचित अनलाइन मलाई फाइदा लिए, फेरि देख्न कहिल्यै. त्यसपछि डिसेम्बर मा, शीर्ष अघि दिनहरुमा, म के मार्जिन व्यापार वास्तवमा थियो सिकेका. पागल एक सानो बिट. एक थोपा समयमा सुतेको झर्ने र त्यसपछि सम्पूर्ण कुरा chasing गर्दा राम्रो रकम हराएको (40 BTC) तल 0.02 BTC.
म बाहिर तहसनहस छु. म यो भन्दा बढी मेरो जीवन समाप्त गर्न लागिरहेको छु भन्ने कुरामा विश्वस्त छु र मैले पहिले नै मेरो मामिलामा क्रममा संसारबाट आफैलाई अलग र प्राप्त थालेका छौं. म प्रकट र reddit यो admitting अजीब महसुस, तर यो पोस्ट घर हिट, जस्तै अवस्था भन्दा आफूलाई हत्या गर्ने मान्छे दाइ बारेमा मुख्य उप को एक गर्छ.
म यस प्रकारको को setbacks मौसम सक्नुहुन्छ गर्नेहरूलाई पराउँछु तर म तिनीहरूलाई एक छैन. म Bitcoin एक खेल परिवर्तन विचार थियो कि सेतो कागज पढ्ने मिनेट देखि म थाह. म यसलाई मा मेरो बचत पोखे, विश्वस्त थाक मेरो एक लाख लायक भनेर (20K) भित्र5वर्ष (म यो लगभग पूर्ण भनिन्छ). यो पनि म एउटा extravagant जीवनशैली बाँच्न चाहनुहुन्छ रुचि होइन, मैले मेरा जीवनमा एक पटक लागि आर्थिक सुरक्षित महसुस गर्न चाहन्थे र मलाई नजिक ती संग धन साझेदारी र सकारात्मक कारोबार निर्माण गर्न मद्दत गर्न चाहन्थे र राम्रो संसार. पंप र डम्पर र लेम्बोर्गिनी मिम्स त obnoxious छन्, रूपमा विश्व कुनै पनि थप mindless hedonistic consumerism आवश्यक यदि. म राम्रो गरिब अप भयो र घर बढावा गर्न पालुङ्गो घर देखि बाउन्सगरीएका र विद्यालय देखि स्कूल. म बल्लतल्ल कलेज मार्फत यसलाई गरे र कुनै marketable कौशल छ. म केही महिना पछाडि मेरो मृत अन्त बिक्री जागिर गुमाए र बल्लतल्ल खरीद रही फर्केर जान आफैलाई ल्याउन सक्दैन. म वर्ष भर बलियो आयोजित, तापनि म गर्नुभएको पक्कै समयमा पैसा प्रयोग गर्न सक्छ. काम गर्न म सधैं मेरो आफ्नै भोजन ल्याए र सधैं म सकेजति सट्टा Uber लागि तिर्ने को जब मेट्रो लिए. म फर्केर केही हजार डलर निवेश 2013 र यो एक मुद्रा देखे कहिल्यै. म दानको तल बारी गर्न आत्म सम्मान छैन किनभने ओपी मलाई भन्दा धेरै आदरणीय छ तर म पनि स्पष्ट डन राम्रो मान्छे नै अवस्था भएका मानिसहरूको सानो सेना गर्न दान छैन भनेर निश्चित छु र म 'टी यसलाई जसरी पनि योग्य. जब म मित्र चलान, तिनीहरूले म लामो समय को लागि एक Bitcoin proponent भएको छु थाहा किनभने तिनीहरूले सधैं बारेमा म गरिरहेको हुनुपर्छ कसरी राम्रो सोध्न. हँसिलो र आँखा तिनीहरूलाई देख Bitcoin बारेमा सकारात्मक कुरा गर्दा अविश्वसनीय taxing छ र म तुरुन्तै पछि गर्न सक्छन् निकटतम रद्दीटोकरीमा अप फेंक गर्न चाहनुहुन्छ.
म ब्रह्माण्डकै कही थाहा, त्यहाँ एक 'मलाई छ’ जो मार्जिन व्यापार विरुद्ध निर्णय वा केही घाटा पछि रोकियो वा भालु बजार को सुरुमा साँढेको खेल्न सुरु भएन. हुनत मलाई, म एक मूर्ख छु र म मात्र कुरा जीवनमा मेरो लागि जाँदै squandered. मलाई आशा छ अरूलाई चेतावनी पालन, तर म भन्दा हुनेछ थाहा छैन. या त बाटो, म यो जस्तै केहि जान मन को प्रकार छैन र म फेरि Bitcoin चन्द्र हेर्न र त्यागेका हुन खडा गर्न सक्दैन. यो पैसा मानिसहरूमाथि त्यस्तो शक्ति हुन सक्छ कि दुःखी छ. मलाई थाहा धेरै आफ्नो जीवन नाटकीय थियो गरेको राम्रो लागि परिवर्तन तर म त्यहाँ सिक्का दुई पक्ष छन् ठान्नु.
म अझै पनि Bitcoin र यो उप भन्दा obsess किन पनि थाहा छैन. म शाब्दिक केहि को अधिकांश समय लाग्छ सक्दैन. म यसलाई केही धेरै कम रकम गर्न ड्रप र म मा किन्न सक्षम छ कि भनेर आशा राख्न अनुमान तर म छैन किनभने त्यस अर्थमा बनाउन गर्दैन $10 फिर्ता राख्न मेरो नाम. म केही महिना मेरो बेरोजगारी लाभ र आवास गुमाउन जाँदै छु र साँच्चै एक पटक भन्ने हुन्छ बारी कतै छ.
मलाई थाहा अधिकांश मानिसहरू आफ्नो bootstraps द्वारा आफूलाई अप पुल र बोक्न थियो तर मलाई थाहा म मेरो मन कहिल्यै उम्कन सक्ने. आफ्नो दयालु र तर्क टिप्पणी मा नकारात्मक rant दु: खी. म ओपी सबै भन्दा राम्रो इच्छा र उहाँले म के भन्दा अग्निपरीक्षाहरू तिर एक धेरै राम्रो मनोवृत्ति छ जस्तो देखिन्छ, पनि stakes कि धेरै उच्च रहेको संग.
सम्पादन: म ज्यादातर यस पोस्ट पछुताउनु. म क्रमबद्ध को यो गाडे प्राप्त हुनेछ समझ, यो मुद्दा अझै पनि राम्रो सक्रिय थियो भन्ने महसुस गरेनन् र म माथि टिप्पणी मा पोस्ट गर्ने. टिप्पणी लागि धन्यवाद, Pms र दयालु शब्दहरू. म केहि पनि तत्काल खतरा छैन र आफैलाई लागि दया पार्टी सुरु गर्न प्रयास गरिएन. तैपनि, आफ्नो चासो लागि धन्यवाद.
JungleSumTimes म त्यहाँ पुग्नुभएका. आफ्नो संपूर्णता मा मेरो साम्राज्य गुमाए 10 धेरै अगाडी. फिर्ता वर्ग एक. तपाईं awhile लागि तीतो र क्रोधित हुनेछु. दृश्यहरु परिवर्तन प्रयास. अक्षांश परिवर्तन.
बस तपाईं के को लागि कृतज्ञ हुन सिक्न. अझै पनि आफ्नो दृष्टि छ? आफ्नो हात अझै पनि काम? तपाईं बताउन Jokes मा राम्रो छौं? मूल कुराहरू. यी कुराहरू लागि माथि आफ्नो कहिल्यै मायालु तारा धन्यवाद.
किनभने पैसा भएको वा कुनै पनि पैसा भएको तपाईंलाई हुन् परिवर्तन गर्दैन. कि मान्छे मा काम. उहाँलाई केही सुस्त दिन. तपाईं फिर्ता हुनेछु. बस र आफैलाई क्षमा धेरै लिन्छ.
Rabbit0123 यसलाई ठीक हुन जाँदै गर्नुपर्छ.
त्यहाँ एक चिनियाँ मान्छे सुन्दर घोडा थियो र सबैलाई उनको बारेमा डाह थियो बारे मा एक कहानी छ, जस्तै भन्दै "यार तपाईं त धनी छन्". उहाँले हँसिलो थियो र जवाफ दिने "haha हामी देख्नुहुने". केही बिन्दुमा त्यो जंगल मा भाग्यो, यसैले मान्छे "भन्दै थिए तपाईं थिए दायाँ ओह, त्यो गएको हो र तपाईं मानिस गरिन्छ !". उहाँले जवाफ दिनुभयो "हामी देख्नुहुने". केही महिना मा घोडा फिर्ता केही अन्य घोडाहरू गए – केटाहरू त्यो जंगली फेला. मान्छे स्तब्ध थिए "आहा अब तपाईं गाउँमा अमीर व्यक्ति हुन्, त्यसैले खुसी हुनुपर्छ!". उहाँले जवाफ थियो फेरि "हामी देख्नुहुने". त्यसपछि उनको छोरा जंगली घोडा सवारी प्रयास गर्दा गिर र आफ्नो खुट्टा भङ्ग… जो मध्ययुगीन चीन मा धेरै खराब अवस्था थियो . "ओह यो सबै धन एक श्राप हुन बाहिर गरिएका". "हामी देख्ने!". moths को एक जोडी मा चिनियाँ सम्राट युद्ध सुरु र गाउँमा देखि सबै स्वस्थ केटाहरू लिएर, पाठ्यक्रम भाँचिएको खुट्टा थियो जो बाहेकको. मान्छे तहसनहस थिए. "ओह कसरी तपाईंलाई पुरानो मानिस थिए , अब हामी केही छ, हाम्रो प्रिय छोरा मूर्ख युद्ध मा लड्न गएका छन्, र तपाईं आफ्नो घोडा र आफ्नो बच्चा राखिएको !". उहाँले जवाफ दिनुभयो के अनुमान!
यो एक धेरै धेरै पीडा छ र हामी आफ्नो पीडा र दुःख साझेदारी गर्न सबै यहाँ. हुनत सम्झना गर्न महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईं मात्र केही BTC हराउने छ, र जीवन मात्र होइन अप र मात्र चढाव छ, यो दुवै को एक मिश्रण छ. यसलाई अप मा पनि उत्साहित र तल मा पनि तहसनहस प्राप्त गर्न आफ्नो शक्ति साँच्चै छ, एक पछि अन्य निम्न छ , खुला रहन.
यसलाई ठीक यार हुन जाँदै गर्नुपर्छ, यो अहिले पनि ठीक छ. तिमिले देख्ने छौ.
gypsytoy धन्यवाद, मानिस. त्यो वास्तवमा राम्रो सशक्त रूपक हो र म अघि यो सुने छैन. यो कुरा सधैं राम्रो वा खराब परिवर्तन छन् साँचो हो र त्यहाँ लागि बाँच्न पक्कै धेरै कुराहरू छन्, म सिर्फ थाहा मलाई यो सारा अग्निपरीक्षाहरू को जाऔँ लागि यो कठिन वा असम्भव हुनेछ. मेरो मन पहिले नै मलाई tortures र अब यसलाई एक गुच्छा त्यसो गर्न थप इन्धन छ.
फेरि पनि धन्यबाद, म मनमा यी टिप्पणीहरू लिइरहेको छु.
doc_samson तपाईं कथा चाहनुहुन्छ भने तपाईं जेन केही पुस्तकहरू पढेर आनन्द सक्छ. त्यहाँ विशेष थियो, यो नाम छैन सम्झन सक्नुहुन्छ, तर यो धेरै सानो र धेरै बाक्लो थियो र बस दुई प्रत्येक पृष्ठ वा एक दृष्टान्त थियो. योद्धा आत्मामा विशेष गरी केही जेन पुस्तकहरू. कुरा धेरै तपाईं साँच्चै यसको fullest प्रत्येक दिन बाँच्न सक्छ त मृत्यु स्वीकार मन, आदि.
पनि ताओ चिंग चिनियाँ दर्शन पुस्तक te. र शायद केही बौद्ध.
र मार्कस Arelius’ ध्यान, वैराग्य धेरै जेन धेरै समान छ जो.
मृत्यु हामीलाई सबै मुस्कान, तर सबै मानिस के गर्न सक्नुहुन्छ फिर्ता मुस्कान छ.
तपाईं आफ्नो सोचाइमा शक्ति छ – बाहिर घटनाहरू. यो महसुस, र तपाईं बल पाउनुहुनेछ.
आफ्नो जीवनको आनन्द आफ्नो विचार गुणस्तर निर्भर.
बाह्य केहि तपाईंलाई व्यथित छ भने, दुखाइ को कुरा नै कारण छैन, तर यो तपाईंको अनुमान गर्न; र यो तपाईं कुनै पनि क्षण मा रद्द गर्न शक्ति छ.
Fontas आफ्नो पहिलो भाग्य, गरे र हराएको. म पनि त्यहाँ पुग्नुभएका.
त्यहाँ केवल दुई सम्भावनाहरू छन्. यो सबै भाग्य थियो, वा कौशल थियो?
यो भाग्य थियो भने, त्यसपछि तपाईं क्यासिनो मा अकल्पनीय रात थियो, तर बाहिर cashed कहिल्यै. अन्त मा घर जित्यो, तिनीहरूले सधैं. तपाईं पछि यसलाई राख्नु, यसको बारेमा एक मेमे बनाउन, र यो बारहरू मा बताउन एक कहानी छ. नीलो गोली.
यो कौशल थियो भने, तपाईं रातो गोली गर्दै हुनुहुन्छ. अर्को 3K अप भेला, र फेरि माथि यो सबै के. तपाईँ गत वर्ष के गरे दोहोरिन – वास्तबमा, सजिलो र छिटो दोस्रो समय वरिपरि हुनेछु. तपाईं एक वर्ष पछि हुनुहुन्छ, कि बेकारी, तर तपाईं यो सबै फिर्ता र थप बनाउन अन्त छौँ. छ, आफ्नो रणनीति साँच्चै ध्वनि छ भने.
बनाउन र कहिल्यै आफ्नो पहिलो भाग्य गुमाउन गर्ने धेरै मानिसहरू फेरि प्रयास गर्नुहोस्, र यो भाग्य वा कौशल थियो भने पत्ता कहिल्यै.
म मेरो पहिलो व्यापार भाग्य गुमेको पछि खरायो प्वाल मा कूद समाप्त. मेरो जीवन को सबै भन्दा राम्रो निर्णय. मेरो दोस्रो पहिलो भन्दा पनि छिटो आए, र धेरै ठूलो थियो – मूल ऐसे अब miniscule जस्तो.
यो तिमीमा भर पर्छ, यदि तपाईं पत्ता लगाउन आफ्नो खरायो प्वाल कसरी गहिरो जान्छ चाहनुहुन्छ.
zksnugsम आफ्नो पीडा बुझ्न. म साँच्चै के.
कहिलेकाहीं म गुप्त को थाहा आए कहिल्यै इच्छा. यो एक आशीर्वाद र एक श्राप दुवै हो. आशिष् तपाईं 'पागल gainzz' प्राप्त गर्न सक्छन् किनभने, तर एकै समयमा, तपाईं यो eerie संसारमा फन्दामा प्राप्त, जहाँ आफ्नो मन तपाईं एक करोडपति रिटायर सक्छ तपाईं कसरी प्रारम्भिक बेचिएको थियो भने जस्तै विचार गर्न Wanders / कि गलत व्यापार गरे / सुरुमा आदि किनेको. म यस उम्कन कहिल्यै गर्न सक्छन् छैन. लामो हामी बाँच्न हामी सधैंभरि यी विचार गर्न दास हुनेछ, जुन हामीले 'फरक गरेको' सक्थे के जहिले पनि फिर्ता हामीलाई haunt हुनेछ. हामी शायद कहिल्यै टाढा हिंड्न र यसको बारेमा भूल सक्छ, हामी लाजमर्दो अवस्था देखि के गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै. जबकि अन्य भूल सकिन्छ, हामी हाम्रो आफ्नै कार्यहरू कहिल्यै बिर्सन.
Fontasबनाउने सामना र भाग्य गुमेको को जेन तरिका – त्यहाँ मात्र हो2सम्भावनाहरू. यो भाग्य थियो वा कौशल थियो.
यो भाग्य थियो भने, त्यसपछि म क्यासिनो मा अकल्पनीय रात थियो, तर बाहिर cashed कहिल्यै. अन्त मा घर जित्यो, तिनीहरूले सधैं. मलाई पछि यो सबै राख्नु, यसको बारेमा एक मेमे बनाउन, र यो सिर्फ बारहरू मा बताउन एक हास्यास्पद कथा बन्न छौँ. नीलो गोली.
यो कौशल थियो भने, म रातो गोली लिएर छु. एउटा सानो आधार अप भेला, र फेरि माथि यो सबै के. के म वरिपरि पहिलो पटक गरे दोहोरिन – वास्तबमा, सजिलो र छिटो दोस्रो समय वरिपरि हुनेछु. छ, रणनीति साँच्चै ध्वनि छ भने.
बनाउन र आफ्नो पहिलो भाग्य गुमाउन गर्ने धेरै मानिसहरू कहिल्यै भाग्य वा कौशल थियो भने पत्ता.
म मेरो पहिलो dotcom व्यापार भाग्य गुमेको पछि खरायो प्वाल मा कूद समाप्त. मेरो जीवन को सबै भन्दा राम्रो निर्णय. मेरो दोस्रो पहिलो भन्दा पनि छिटो आए, र धेरै ठूलो थियो – मूल ऐसे अब miniscule जस्तो.
मेरो मात्र आफूले पछुतो मान्ने बर्बाद छ2मां घरमा लामो गरिब वर्ष यो सबै मेरो टाउको मा क्लिक गर्नु अघि – भाग्य वा कौशल, म कहिल्यै थाहा हुन सक्छ – म फेरि प्रयास गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् नभएसम्म. यो कौशल थियो बाहिर जान्छ.
gypsytoy हाँ यो निश्चित कठिन छ. म मात्र जवाफ जीवनको अन्य पक्षमा थप मूल्य पाउन छ अनुमान. सम्बन्ध, सोख, फिर्ता दिने. यो जस्तै केहि पछि आफ्नो मन सुधार गर्ने प्रयास गर्ने उपायहरू धेरै छन्, म उपकरण वा त्यसो गर्न इच्छा छैन बस चिन्तित छु. टिप्पणी लागि धन्यवाद.
AjaxFC1900 मलाई लाग्यो म एक व्यापारिक प्रतिभा, एक भगवान, जे सुकै होस्
धन बारे भूल, डुङ्गा, होटल आदि…दिन को अन्त मा यो कि भावना बारेमा सबै छ, सबैलाई जीवनमा कम्तिमा एक पटक जस्तो महसुस गर्न योग्य…तपाईं अत्यन्तै जवान महसुस भनेर अनुभव…धेरै चिन्ता छैन, दिन को अन्त मा हामी सबै मूलतः पहिले नै मृत्यु हुनुहुन्छ, कुराको ठूलो योजना मा यो तपाईं गरे वा हराउने यदि भनेर धेरै कुरा छैन5लाखौं , कि धेरै हाम्रो अस्तित्व कुरा छैन कुराको ठूलो योजना अझ तपाईं बताउन र, जस्तै हामी जसरी पनि पहिले नै मृत्यु सबै हुनुहुन्छ भने.
यो जटिल छ, कहिलेकाहीं, विगतमा सजिलो हुन प्रयोग… युद्ध जाँदै जस्तै र त संसारमा जीत वा टाउको मा एक बुलेट प्राप्त वा युद्धभूमिमा मर्न…अब हामी अब ती कुराहरू के छैन र हामी वास्तवमा हाम्रो दिमाग / मन लागि मृत्यु भन्दा तरिका बुरा छ विफलता सामना गर्न. यसलाई फिर्ता तरिका सजिलो थियो, हामी कम बौद्धिक र थप आक्रामक थिए जब
Cinnamon_Twist म साँच्चै यो तर्क मन परेन. विगतमा मान्छे आज हामी तिनीहरूलाई savages बनाउन गर्दैन छ तिनीहरूले accumlated ज्ञान मा बस्न छैन बस किनभने अविश्वसनीय बौद्धिक थिए. तपाईं अझै पनि कसैले तपाईं रोक छ चाहन्थे भने युद्ध गर्न जान सक्छ.
त्यो जीवन दर्शन पनि साँच्चै दुःखी छ. यो आत्म किनभने जीवन अन्ततः लागि समाप्त हुनेछ तपाईं यसलाई त अर्थहीन र पैटी पाउन पर्छ भनेर भन्ने कुरा स्पष्ट छ.
JungleSumTimes म त्यहाँ हामी ठूलो स्क्रिनमा सबै बस साना blips हुन् भनेर चिन्न हासिल स्वतन्त्रता केही क्रमबद्ध छ लाग्छ. तपाईं यसलाई साँच्चै सम्म तपाईं मुक्त तपाईंको अस्तित्वको insignificance स्वीकार गर्दा आफै र व्यक्ति जस्तै हुन र समाज तपाईं न्याय कसरी छ बारे सबै समय चिन्ता भन्दा तपाईंलाई मनपर्ने कुराहरू पछि लाग्न.
किनभने तपाईंको bankroll जीवनमा सफलता हुन तपाईं कसरी हेरिएको छन् र दृढ को ठूलो भाग हो मान्छे यो खराब यसरी प्राप्त. त्यहाँ धेरै राम्रो उपाय हो.
pepe_le_shoe पोकर कौशल को एक तत्व छ, तर एक जुवा दुर्व्यसनी अप antes यदि, उहाँले गैंबल हुनेछ. उहाँले लागि तंग प्ले सक्छ 2, 4, हुनसक्छ 6+ घण्टा, दिन पनि, तर केही बिन्दुमा, त्यो घर जान्छ अघि, उहाँले गैंबल हुनेछ. उहाँले अनुशासन कि केहि छिन रहने ल्याप्स हुनेछ, उसले गर्ने छ, बस एक पटक, यस नहुनु विरुद्ध जाने र एक भित्र सीधा तान्ने मा सबै शर्त, उहाँले बाहिर आएको भयो कि तल गहिरो थाह हुँदा वा तल सेट संग पनि कडा धक्का.
त्यहाँ सबै समय जीत गर्ने पोकर खेलाडी छन्, शायद उनि भयो कौशल, को गणित, या मान्छे पढेर. तर यी मानिसहरू को कुनै पनि साँचो gamblers छन्. Gamblers सधैं केही घर जाने.
एक समय को लागि मलाई थियो. म अब पैसा को लागि प्ले छैन.
SamAiken म छैन 200 BTC, तर म यस्तै झुकाव परिस्थिति कम्तीमा दुई पटक मा भएको छु. तपाईं छिटो धनी प्राप्त गर्न र त्यसपछि आफ्नो सबै पैसा गुमाउनु पहिलो छैनन्. Luckily, तपाईं धेरै रूपमा जेल मा अन्त छैन “धनी छिटो प्राप्त” मान्छे.
तपाईं भने के अनुसार, तपाईं विविधीकरण को महत्व र जोखिम-व्यवस्थापन बारे ठूलो ज्ञान अंतराल छ, त्यसैले यसलाई अनुसन्धान केही समय खर्च. अब तपाईं BTC संग disgusted छन् र म धेरै राम्रो तरिकाले यो भावना थाहा, तर यो पारित हुनेछ.
त्यहाँ हामी केही हप्ता वा महिना एक मंदी को बजार छ भनेर एक मौका छ, त्यसैले तपाईं शान्त गर्न समय, लगानी बारे आफूलाई शिक्षित र अर्को लहर मा हामीलाई पछि सामेल. तपाईं धेरै अनुभव र ज्ञान छ, औसत गुप्त निवेशक भन्दा.
र अब महत्त्वपूर्ण भाग – तपाईं अझै पनि स्क्राच आफ्नो पोर्टफोलियो पुनर्निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ! यो धेरै लामो हुनेछ, केही महिना भन्दा, तर तपाईं यसलाई बनाउन सक्छ. म यसलाई गरे. धेरै मानिसहरू गरे. तिमीले यो गर्न सक्छौ, धेरै.
र व्यापार सधैं जोखिमपूर्ण छ, तनावपूर्ण र समाज वा समुदायमा कुनै पनि मूल्य थप्न छैन, त्यसैले लगानी र hodling धनी प्राप्त गर्न धेरै सुरक्षित तरिका हो, बरु व्यापार भन्दा. तपाईं प्राप्त वृद्ध, अधिक खतरनाक तनाव लागि हुनेछ, यो पनि तपाईं मार्न सक्नुहुन्छ (जस्तै. हृदयघात). त्यसैले आफ्नो समय लाग्न, जोखिम-व्यवस्थापन सिक्न, कहिल्यै आफ्नो सम्पूर्ण पोर्टफोलियो खेल्न, र तपाईं फेरि धेरै cryptos प्राप्त गर्दा, फिएट पैसा केही रकम सार्दा आफ्नो पोर्टफोलियो rebalance गर्न नबिर्स, अचल सम्पत्ति वा स्टक.
अलग लगानी बाट, कृपया जेट उडान एक धनी मान्छे हुनुको लागि बाहेक जीवनमा के गर्न चाहनुहुन्छ के ध्यान गर्न नबिर्स. मानिसहरूलाई मदत र समुदायको योगदान कसरी तपाईं चाहनुहुन्छ? र यो दिशा मा आफ्नो समय लगानी. आफ्नो अनुभव, ज्ञान र प्रतिष्ठा बस BTC गरे जस्तो अचानक हराउनु हुनेछ.
बुद्धिमानी हुन र शान्त रहन!
यस गुप्त उद्योग गर्न ठूलो योगदान गरे जो? शीर्ष 7
Satoshi Nakamoto - बी ...
यदि एउटा निवेशक च छ ...
अघिल्लो पोस्ट:Blockchain समाचार 27 जनवरी 2018
अर्को पोस्ट:Blockchain समाचार 28 जनवरी 2018